Intliziyo yeeflethi zaseParos - Iflethi ka-Eva - I-Airbnb
Intliziyo yeeflethi zaseParos - Iflethi ka-Eva
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPanagiotis
Sineflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi okulala avulekileyo aneWiFi ekhawulezayo embindini weParikia, ilali ephambili kunye nezibuko laseParos. Ngaphantsi kwemizuzu eyi-5, uza kuba kweyona ndawo isembindini welali kwaye unokufikelela kumalwandle ayi-2. Kwindawo ethe cwaka, ecaleni kwendawo yokupaka, iflethi yethu ilungele ukufumanisa zonke iivenkile, iivenkile zokutyela, iikhefi kunye nezitrato ezintle zaseParikia. Intliziyo yeParos Apartments yindawo efanelekileyo yokubuka sonke isiqithi!
Iflethi ilungiswe ngokupheleleyo ibe zonke izixhobo zombane zintsha. Ikhitshi linomatshini wokuhlamba izitya, ioveni, ifriji enkulu enefriji nomatshini wokuhlamba impahla. Zonke iibhedi nazo zintsha kwaye zikwenza uzive uthe zava.
Iindawo ezikufutshane ezithe cwaka, ecaleni kwendawo enkulu yokupaka. Ngaphantsi kwemizuzu eyi-4 uhamba ngeenyawo, unokufumana iivenkile ezininzi, iivenkile zokutyela, iikhefi kwaye ube kwizitrato eziphambili zedolophana.
Umbuki zindwendwe ngu- Panagiotis
Ndiyavuya ukunceda xa kukho imfuneko kunye nokukunika iingcebiso malunga nesiqithi.
Inombolo yomthetho: 00001106525
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Paros